Energy Sistem ESG 5 Shock ekweisi nyocha, njikere maka egwuregwu | Akụkọ akụrụngwa
Nyochaa Energy Sistem ESG 5 Shock ekweisi
Rafa Rodríguez Ballesteros | | Ngwa, Foto na ụda, Nyocha, Videogames
Taa anyị na-ekwu maka ya otu n'ime ngwa "amanyere" maka onye ọ bụla na-egwu egwuregwu bara nnu. Na mgbakwunye inwe otu egwuregwu dị ike nke nwere ike ịkwado egwuregwu ndị kachasị ugbu a. Inwe oghere dị nsọ iji nwee ọ enjoyụ zuru oke na egwuregwu kachasị egwu. Ọ dị mkpa ịnwe ezigbo ekweisi ike ime ka anyị nwee ọ enjoyụ ahụ n'ụzọ kwekọrọ nnọọ na egwuregwu ọ bụla.
Ọzọkwa site na enyemaka nke Energy Sistem anyị enweela ike ịnwale n'ụzọ zuru ezu ihe Energy Sistem ESG 5 Shock. Ekweisi ụfọdụ echiche ma hazie nke ọma maka ọtụtụ ndị egwuregwu. Na nke ị gaghị echefu otu nkọwa nke egwuregwu ahụ. Na nke ị nwere ike soro ndị egwuregwu ndị ọzọ nwee mmekọrịta n'ụzọ kachasị dị irè.
1 Energy Sistem ESG 5 Shock, emere ka egwu
3 100% egwuregwu aesthetic
4 Ìhè na ọma jijiji ka n'ụzọ zuru ezu na-eche egwuregwu
5 Ike na ụda dị mma
6 ESG 5 Nkọwapụta Nka na ụzụ
7 Uru na ọghọm Energy Sistem ESG 5 SHOCK
Energy Sistem ESG 5 Shock, emere ka egwu
Ruo ugbu a na Actualidad Gadget m enwezị ihu ọma ịnwale ọnụọgụ nke ngwa ndị metụtara ụda. Ndị na-ekwu okwu na ekweisi n’ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile. Ma enweghị m ohere itinye igwe okwu egwuregwu n’ule. Ezubere maka otu n'ime ngalaba kachasị achọ na mpaghara teknụzụ nke ahụ anaghị edozi maka ọkara ihe.
Iji mee ngwaahịa na-adabere n'ụzọ doro anya na mpaghara "videogames", Energy Sistem anabatala ihe ịma aka nke imeju afọ ndị na-achọ ịdị mma. Na ngwaahịa nke na-adabara adaba n'ụzọ zuru oke na ngalaba egwuregwu ma nwee ike ịnye arụmọrụ dị oke elu. Ike usoro ESG 5 Shock ebiela ndụ ma ugbu a, anyị ga-agwa gị ihe niile gbasara ha.
Ọ bụrụ na oge eruola ka ị nweta ụfọdụ ekweisi iji mezue akụrụngwa egwuregwu gị, ESG 5 Shock si Energy Sistem bụ nhọrọ magburu onwe ya. Lee ị nwere ike ịzụta ha na Amazon na ọnụahịa kachasị mma.
N’ime obere ngalaba akwụghị ụgwọ anyị ji arụ ọrụ ọ bụla anyị nwalere, anyị agaghị agbaghara Energy Sistem ESG 5 Shock. Ozugbo oghe igbe ahụ, nke nwere ọdịdị dị egwu na n'ụdị egwuregwu kachasị ọcha. Naanị anyị na-ahụ ekweisi, nke ejiri obere velcro tinye na igbe ahụ. Na obere igbe ebe anyị na-ahụ ntuziaka onye ọrụ, ụfọdụ akwụkwọ na data metụtara nkwa, na a ngbanwe maka coaxial njikọ.
Ọ bụghị ihe ijuanya, ọ dịghị ihe ga-egbughị na ihe ọ bụla na-atụ uche. Headfọdụ ekweisi, ya na eriri gụnyere, na ihe ọ bụla ọzọ. Kedu ihe ọzọ ị tụrụ anya ịchọta? 😉
The Energy System ESG 5 Shock na Amazon maka naanị € 50
100% egwuregwu aesthetic
Dị ka anyị gwara gị, imewe nke ekweisi ndị a bụ ebumnuche doro anya maka otu ụdị ndị ahịa. Na n'ụzọ zuru oke akọwapụtara. Agbanyeghị na ịnwere ike iji ekweisi ndị a maka mkparịta ụka FaceTime, ha adịla Ezubere iji wepụta ahụmịhe egwuregwu egwuregwu kachasị emetụta. Maka nke a, ha nwere ọtụtụ akụkụ iji mee ka anyị pụta ìhè nke anyị na-agwa gị ugbu a.
Ahụ anyị na-eche ihu ekweisi isi. Dị ka anyị si mara, ụdị ngwa a dị ntakịrị na ejiji. Ewezuga ụdị ekwe ntị nke ụdị TWS nwere obere usoro na nha, ndị a ESG 5 Shock si Energy Sistem bia kpuchie mkpa ụfọdụ. Ma kpọmkwem nha abụghị otu n'ime ihe ndị chọrọ chọrọ.
Dị ka ezigbo egwuregwu na-ada ụda ngwa, na mgbakwunye na ekweisi, anyị nwere igwe okwu igwe-agwa niile etinyere na ya dị mkpa site na ọganihu Boom Mic iji jide olu gị nke ọma n'oge niile. N'adịghị ka ụdị ndị ọzọ, igwe okwu a anaghị abanye n'ime otu ekweisi. Nwee a nkwado onye ọ bụla nke anyị nwere ike ịmegharị, mbugharị ma ọ bụ pụta dika ochicho anyi si di.
Ọ bụrụ na anyị elee anya na ihe owuwu ahụ, anyị ga-ahụ otu n'etiti plastik a tụrụ anya ka anyị ga-esi nweta nza dị mma maka ntị na isi. A na-ekpuchi ha na ihe yiri ka ọ bụ ihe na-eme ka ọ dị mma na nke dị mma ọbụlagodi mgbe ị na-eyi ha ogologo oge. Mkpebi amamihe dị na ya n'ịtụle egwuregwu marathon ndị a na-egwu mgbe ụfọdụ.
Ọ bụrụ na ndị a bụ ekweisi ị na-achọ, lee gị Energy System ESG 5 Shock
Ìhè na ọma jijiji ka n'ụzọ zuru ezu na-eche egwuregwu
Na mgbakwunye na ihe owuwu ndị a kpọtụrụ aha, anyị na-ahụ ntinye nke ọkụ ọkụ nke mere ka ekweisi yie ihe ịtụnanya. Anyị nwekwara modul vibration na teknụzụ ịma jijiji, nke ga-eme ka ahụmịhe egwuregwu ahụ dịkwuo ike. Ọ bụ ezie na mbụ ịma jijiji na-ejikwa eduhie anyị, otu oge "na usoro", ha na-eme egwuregwu ahụ ritere ike.
Otu nkọwa iburu n'uche bụ na ekweisi Energy Sistem ndị a ha anaghị ikuku. Ọ bụ eziokwu na maka ọtụtụ ndị a abụghị nsogbu, mana enwere ndị na-ahọrọ njikọ ikuku. N'iburu n'uche awa ole anyị ga-eji egwuregwu, Mara na batrị anyị agaghị agwụ agwụ bụ obi iru ala. Ọ bụ ezie na enwere ekweisi nwere nhọrọ nke iji ha na-enweghị eriri ma nwee ike ijikọ ha mgbe batrị gwụrụ. USB nwekwara na-ekwe nkwa njikọ 100% kwụsie ike na-enweghị nkwụsị ma ọ bụ nkwụsị.
USB n'onwe ya bụ eriri-ụdị naịlọn ntekwasa. Ihe na na-eme ka ọ sie ike, na-adịgide adịgide nakwa na ọ naghị atụgharị ngwa ngwa. Ọ na-adị ike ma dị njikere iguzogide ọtụtụ awa eji ya na-enweghị ahụhụ ọ bụla. N'etiti waya anyị nwere bọtịnụ bọtịnụ onye ọrụ anyị nwere ike hazi, a njikwa akwụkwọ mpịakọta akwụkwọ ntuziaka n'ụdị wiilị, yana bọtịnụ iji rụọ ọrụ ma ọ bụ kwụsị igwe okwu. Na njedebe anyị nwere ụdị ntinye abụọ maka njikọ; Hazie Ọkpụkpọ USB na 3.5mm.
Mezue akụrụngwa egwuregwu gị ugbu a site na isi Ọkụ ESG 5 Shock. Ọ bụrụ na uru ya emeela ka i kwenye zụta ha ugbu a na Amazon na mbufe n'efu.
Ike na ụda dị mma
Site na ule mbu ị hụrụ a mbinye aka ụda àgwà. Na egwu, ahụmịhe ahụ dị ezigbo mma. Nwalee treble na bass anyị ahụghị ihe mgbochi. Ọ na-ada ụda nke ukwuu. Ọbụnadị igwe okwu na-ada ụda zuru oke ma doo anya zuru oke. Na egwuregwu na-aga n'ihu, arụmọrụ ahụ na-enye afọ ojuju ma ha dị jụụ ọbụlagodi inwe ya oge dị mma.
Ndị ESG 5 SHOCK nwere ike kachasị nke 20 mw. Ma ekele a ezigbo ọrụ mkpuchi, ike dị ka ọ dịkarịrị elu. A na-anụ ụda niile dị na egwuregwu nke ọma. Nkọwa nke doro anya na-eme ka ha tinye gbakwunye na egwuregwu ọ bụla.
ESG 5 Nkọwapụta Nka na ụzụ
Nlereanya ESG 5 UMUAKA
Oge ole 20 Hz - 2nd kHz
Aka na magnet neodymium
Dayameta 50 mm
Oke ike 20 mW
Nhazi usoro emechi cicumaural
Teknụzụ jijiji Vda jijiji
Ogologo eriri 220 cm
Jack njikọ SI
Njikọ USB SI
Njikwa olu EE nwere ụkwụ nkịtị
Igwe okwu EE na ogwe aka na-agbanwe agbanwe
Iluminación EE - Ikanam ọkụ
Emezi edozi isi SI
Ibu ibu 368g
Ahịa 50.00 €
Linkzụta njikọ Igwe ekwe ekwe Sistem ...
Uru na ọghọm Energy Sistem ESG 5 SHOCK
Duality nke ohere ekele eziokwu na ha nwere a Igwe okwu Omni-nduzi na-egosipụta teknụzụ Ọganihu Mic.
Ha nwere a eriri ogologona na-eguzogide ọgwụ ihe nke ahụ ga - akwado usoro dị mma nke ọtụtụ awa na - enweghị nsogbu, yana a karịa ogologo zuru ezu.
Soundda dị ike na-enweta nkwanye na ọkwa nke iche nke na-eme ka naanị nụ ma nụ egwuregwu ahụ.
Ekwe omume e wezụga na-ege ntị gị egwuregwu, na-eche ya ekele maka Teknụzụ Ọmụma jijiji, mmezi nke ga - eme ka ị nwee ọ enjoyụ ahụ egwu egwuregwu karịa.
Ugboro abụọ ekwe omume nke njikọ site na ntinye USB ma ọ bụ 3.5 mm.
Ogologo, eriri siri ike
Duality nke formats
Olu nke ekweisi ị na-anụ oke na mpụga ha. Ọ bụrụ n ’iji ESG 5 SHOCK dị nso na onye ọzọ, ọ ga - ekwe omume na iwe ga - ewe gị.
Ha abụghị eriri igwe ikuku na ha enweghị batrị yabụ na anyị ga-achọ ijikọ eriri mgbe niile.
Da iwe na-ada ụda maka ndị dị nso
Ike usoro ESG 5 Shock
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Nyochaa Energy Sistem ESG 5 Shock ekweisi
Anyị gbara Fabián Gumucio ajụjụ, onye isi Rakuten Kobo na Spain